Maka Dean, mutema-weAmerica mugadziri we IBM PC - Afrikhepri Fondation
svondo, 25 july, 2021
kugashira BLACK INVENTORS AND SAVENTS
Mark Dean, Mutema weAmerica muvambi weiyo IBM PC
NAkazvarwa muJefferson City, Tennessee muna Kurume 2, 1957, Mark Dean akawana kuti budiriro yakashanda munhau dzeropa rake. Sekuru vake vaive mukuru wechikoro uye baba vake vaishanda samaneja weDam Tennessee Valley Authority. Mwana akajeka uye ane simba, aigara achitsungirira mibvunzo kubva kune vaanodzidza navo kuchikoro, vachibvunza kana aive Mutema chaizvo nekuti vanhu vatema havafanirwe kuve vakangwara. Maka aive mutambi anozivikanwa wechikoro chepamusoro pamwe nemudzidzi akatwasuka. Kubudirira kwake kwakaramba kuchienderera kukoreji, sezvo akapedza kutanga mukirasi yake aine BS muBiology muMagetsi Injiniya kubva kuYunivhesiti yeTennessee muna 1979.
Muna 1980 Dean akakokwa kujoina IBM sainjiniya. Zvisinei nechinzvimbo chake chitsva, akaenderera mberi nedzidzo yake uye akawana dhigirii raTenzi muinjiniya yemagetsi kubva kuFlorida Atlantic University muna 1982. Sainjiniya weIBM, hazvina kutora nguva kuti zviite basa guru, kushanda wemainjiniya mukuru zvechikwata chakagadzira IBM PC / AT, iyo yepakutanga imba / hofisi komputa. Neaaishanda naye Dennis Moeller, iye akatanga sangano reIndonesia Standard Architecture (ISA), chimwe chinhu chakaita kuti zviyero zvakawanda zvakadai semamashini nemapinduri zvibatanidzwe kuPc, zvichiita kuti PC ive yakanaka uye inogona kutenga chikamu of the kumba kana hofisi yebhizimisi duku. Mutungamiri aizotora zvitatu zvepfumbamwe zvepakutanga zvepentiti izvo mapeji ose akavakirwa. Dean akateedzera nePS / 2 mamodheru 70 kana 80, uye iyo yemavara grafiti adapta (iyo yakaita kuti zvikwanisike kuratidza kwemavara paPC).
Zvisinei nekubudirira kwake kukuru, Dean akaziva kuti paive nezvakawanda zvekudzidza uye zvakawanda kupfuura zvaaigona kuzadzisa, saka akapinda muStanford University muna 1992 uye akahwina doctorate. muchigadzirwa chemagetsi. Makore mashanu gare gare, akagadzwa mutungamiri weAustin Research Laboratory uye mutungamiriri wekuvandudza teknolojia yeBMI Enterprise Server boka. Pasi pehutungamiriri hwake, mu1999, timu yake yakaita kufambira mberi kwakati wandei, kusanganisira kuyedza yekutanga gigahertz CMOS microprocessor. Nebudiriro huru iyi, akagadzwa kuve Mutevedzeri weMutungamiri weKutsvagisa Maitiro kuIBM's Watson Research Center muYorktown Heights, New York, uyezve seMutevedzeri weMutungamiriri weBM's Storage Technology Group. ekuchengetedza masisitimu zano uye tekinoroji nzira yemugwagwa yekambani. Akazogadzwa kuve mutevedzeri wemutungamiriri wehurmware uye masisitimu dhizaini yeboka reBMM neTekinoroji (STG) muTucson, Arizona, uye pakupedzisira mutevedzeri wemutungamiriri weIBM's Almaden Research Center muSan Jose, California.
Pamusoro pemazita ekuremekedzwa nemabasa avo, Dr. Dean akatumidzwa zita rekuti IBM Fellow, kukudzwa kwepamusoro-soro kwakapihwa nekambani (makumi mashanu chete evashandi veIbM 50 ndivo vamwe veBMM uye ndiye aive munhu wekutanga Dzinza reAfrica rakakudzwa kudaro). Muna 1997, pamwe chete neshamwari yake Dennis Moeller, akaendeswa kuNational Inventors Hall of Fame (Tembere ine nhengo dzinosvika zana nemakumi mashanu) uye muna 150 akasarudzwa kuve nhengo yeNational Academy yeInjiniya. Nezvo zvinopfuura 40 patent kana patent inenge ichimirira, Dr. Dean akazvigadzirira kuramba achiita zvakakosha zvikuru panyika ye sayenzi uye kumba uye basa.
chikamu BLACK INVENTORS AND SAVENTS
Africa, kupamba mukamera - Xavier Harel
Gadzira yako yezvokudya zvinokonzera (PDF)
Hippo Mvura Roller kufambisa vanhu vekumaruwa kutakura mvura
Tarisa Lumumba (2000)
Dzvanya pane icon kuti utumire chinyorwa
Vatori venhau, mapurofesa, vadzidzi, vari mukati, vanyori, blogger, unogona kuendesa zvinyorwa zvako pano.